Mandriva သည်ဒေဝါလီခံခြင်းနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည် Linux မှ
ငါဖတ်ပြီးအဖြစ် LinuxZone.es, Mandriva ပြင်သစ်ကုမ္ပဏီကိုယခုလတွင်ဒေဝါလီခံရန်ခက်ခဲသောစီးပွားရေးအခြေအနေတွင်ထပ်မံတွေ့ရှိနိုင်သည်။
ကပေးစာတစ်စောင် စီအီးအို de Mandriva, Dominic loucougainမင်းကြည့်လို့ရတယ် ဒီ link ကို y ဒီဟာလက်ရှိအခြေအနေမတည်ငြိမ်ကြောင်းသေချာစေရန်နှင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောဖြေရှင်းနည်းရှိရန်အလွန်ခက်ခဲသည်။ ကျွန်တော့်အတွက်အဖြေကတော့ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီဘေးအန္တရာယ်ကနေ La Rubia ကိုကယ်တင်ဖို့သူတို့ရဲ့အရင်းအနှီးကိုအားကိုးတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်အခြေအနေတွေဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ငါအရမ်းသံသယရှိတယ်။
အဖြစ်ကောင်းစွာသူတို့ကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပါ LinuxZone, အရာအားလုံးကဒီဇင်ဘာ ၅ ရက်တွင်ကျင်းပသောအစုရှယ်ယာရှင်များအစည်းအဝေးတွင်စီမံကိန်း၏ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအတွက်သဘောတူညီချက်ရရှိရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သော်လည်းအဓိကရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူမှာဖော်ပြသည်။ Linux (အစုရှယ်ယာ ၄၂ ရာခိုင်နှုန်းပိုင်ဆိုင်သူ) ကခွင့်ပြုမည့်အဆိုပြုထားသောငွေကြေးထောက်ပံ့မှုပုံစံနှင့်သဘောမတူပါ နေပြည်တော် တစ် ဦး ချင်းစီအပေါငျးတို့သလိုအပ်သောမြို့တော်ထား၏။ သဘောတူညီချက်မရရှိခြင်းအားဖြင့်, နေပြည်တော် (အရေးကြီးသောရှယ်ယာရှင်)ဘဏ္financingာရေးအရဆက်လက်လုပ်ကိုင်နိုင်မည်မဟုတ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည် Mandriva။ ဤရွေ့ကား, ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်သည်ဖြစ်ပါတယ် ၂၀၁၂ ဇန်နဝါရီလ ၁၆ ရက် ပျောက်ကွယ်သွား Mandriva ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကမ္ဘာကြီးအတွက်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့သတင်းပါ GNU / Linux များ ဒီဖြစ်ပျက်လျှင်။ ငါတို့မျှော်လင့်ပါတယ် Mageia (လူထုအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် Mandriva ၀ န်ထမ်းဟောင်းများက Mandriva ချိတ်ကိုထိန်းသိမ်းသည်) ဒီအရာတစ်ခုခုကိုကြောင့်ထိခိုက်စေခြင်းငှါမ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » Mandriva သည်ဒေဝါလီခံရသည်
Nooooooo !! : D: TORITOOOOOOOOOOOOOOO !!! JAJAJJAJAJAJA …အလေးအနက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ Mandriva လိုစီမံကိန်းတစ်ခုအတွက်ရန်ပုံငွေထောင်ပေါင်းများစွာရှိပါတယ်။ သူတို့ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်“ ဒေဝါလီခံ” တယ်ဆိုရင် Mageia လိုအခမဲ့ကုဒ်နှင့်လမ်းဆုံလမ်းခွများရှိသည်။ အရာပူးပေါင်းအကျိုးစီးပွားယူစတင်လိမ့်မယ်။
ဒါကအံ့အားသင့်စရာမဟုတ်ပါ။ Mageia သည်ကုမ္ပဏီများပေါ်တွင်မှီခိုခြင်းမရှိသောကြောင့် Mandriva ၏ညွှန်ကြားချက်၊ Mac O $ ကိုကူးယူခြင်း၊ Mandriva 2010 သို့ပြန်သွားရမည့်သူများရှိပါသည်။
ဒါဟာတကယ့်ကိုအရှက်ကွဲစရာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ GNU / Linux လောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းတဲ့အရာက Phoenix အဖြစ်ကိုယ်စားပြုနိုင်ပြီးပြာကနေအမြဲပြန်လာနိုင်ပါတယ်။
Mandriva ကဒီဆေးကိုကြာမြင့်စွာကတည်းကသောက်နေတုန်းပါပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့အစုရှယ်ယာရှင်တွေကလုံးဝရေရှည်တည်တံ့မယ့်ပုံမပေါ်တဲ့စီမံကိန်းတခုခုကိုပိုက်ဆံထည့်တာကိုငြီးငွေ့နေလို့လား၊ Mandriva ဟာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့တာကြာပါပြီ။ ငါဒီဖြန့်ဖြူးမှုကိုအချိန်အတော်ကြာအသုံးပြုသူဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်လည်းကျွန်တော်နောင်တရမိပါလိမ့်မယ်။
ငါပိုအကောင်းမြင်ချင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဒီအခြေအနေမှာ Mandriva ဟာပထမဆုံးအကြိမ်မဟုတ်ခဲ့ဘူး။ ဒါကြောင့်အခြေအနေတွေကိုကြည့်ပြီးဒီဟာက Mandriva ကိုထုတ်ပယ်ခြင်းရဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်သည်။
ငါ Mageia နှင့် PcLinuxOS ကဲ့သို့သောအခြားအရာဝတ္ထုများကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်မျှော်လင့်ပါသည်။
mandriva ဘာဖြစ်သွားပြီနည်းယနေ့တွင်ဇန်နဝါရီ ၁၇ ဖြစ်သည်
အလွန်ကောင်းသောမေးခွန်း ^^ သင်ထွက်ရှာရန်ရှိသည်
Blob Wars: GNU / Linux ပေါ်မှာငါ့အကြိုက်ဆုံးဂိမ်းတွေထဲကတစ်ခု
FreeBSD 9.0 ကိုဖြန့်ချိခဲ့သည်